Dowlada oo soo bandhigtay miisaaniyada sanadka: Maxaa ugu jira Soomaalida? | Somaliska
Dowlada cusub ee Sweden ayaa maanta si rasmi ah u soo bandhigtay miisaaniyadeeda sanakda soo socda, taasoo ay muhiim tahay in uu ansixiyo baarlamaanka Sweden (Riksdagen) bisha December. Miisaaniyada cusub ee ay soo bandhigtay wasiirada dhaqaalaha Magdalena Andersson ayaa ka kooban 25 bilyan oo karoon oo lagu maalgalin doono Sweden sanadka soo socda.
Lacagta inta badan ayaa la galin doonaa caafimaadka, iskuulada, waxbarashada dadka waaweyn, canshuur dhimista dadka waayeelka ah, lacgata A-kassada oo la siyaadin doono iyo shaqaalaha daryeelka dadka waaweyn oo la kordhin doono. Dowlada ayaa lacagahaas ka soo xarayn doonta canshuuraha oo la siyaadin doono, sida canshuurta laga bixiyo shaqaalaha da’da yar (arbetsgivaravgifter) oo kor loo qaaday, dadka qaata mushaarka ka badan 50.000/bishii oo iyagana canshuurta lagu kordhin doono.
Arimaha aan isleeyahay Soomaalida xiiso gooni ah ayay u leeyihiin ayaa waxaa ka mid ah in dowladu ay lacag badan ku bixin doonto.
– Traineejobb taasoo ah nuuc ka mid ah baraatiiga oo dadka loo diri doono in ay shaqada ku bartaan. Dowlada ayaa ku bixin doonta 1,6 bilyan oo karoon.
– Lacagta ku baxda socdaalka iyo qaxootiga ayaa iyadana la kordhin doonaa 1,1 bilyan oo kr taasoo la siin doono Migrationsverket si ay u badiyaan goobaha la dajinayo dadka qaxootiga ah.
– Isdhexgalka ayaa waxaa lagu bixin doonaa 16,8 bilyan oo kr taasoo la siin doono kamuunada si ay u qaabilaan dadka cusub, iyo sidoo kale Arbetsförmedligen iyo shirkadaha la shaqeeya si dadka cusub loo caawiyo.
– Lacagta la siiyo hooyooyinka keligood ah (Underhållsbidraget) ayaa lagu dari doonaa 300kr/bishii, iyadoo sidoo kale la kordhin doono lacagta waalidiinta ee Föräldrapenning. Dhinaca kale, waxaa la joojin doonaa lacagta Vårdnadsbidrag.
Dowlada ayaa sidoo kale lacago badan ku bixin doonta difaaca, dhismaha wadooyinka iyo tareenada, horumarinta baadiyaha, iyo arimo kale. 252 milyan oo karoon ayaa sidoo kale lagu bixin doonaa arimaha dhaqanka.
Miisaaniyada cusub ayaa taageero ka haysata xulufada dowlada ee Socialdemokraterna (S) iyo Miljöpartiet (MP) iyo xisbiga Vänsterpartiet (V) balse isku darkooda ma haystaan aqlabiyad. Haddii xulufada Alliansen ay soo bandhigaan iyaguna miisaaniyad u gooni ah ayay arintu ku xirantahay xisbiga SD cida ay taageeraan. haddii ay taageerada siiyaan xulufada Alliansen ayay dhici doontaa dowlada Stefan Löfven iyadoo wadanka lagu celin doono doorasho cusub. Haddii ay ka amuusaan ayaa la ansixin doonaa miisaaniyada dowlada.
October 23, 2014 at 11:32
Fikir ahaan waa la ansixin doonaa maxaa yeelay way ka aamusi doonaa asxaabta Alliansen oo marabaa in sababtooda ay dowlada o dhacdo waana miisanayad fiican
walal jimacale barnbrag ma waxbey ku darayan
JIMCALE AADBAAN KUU SALAAMAY BROTHER, WAXAAN RABAY HAL SUAAL AYAAN RABAY IN AAN KU WAYDIIYO HADII AY MACQUUL TAHAY OO AAD FIKIR IGULA DARSATO, WALAAL WAXAAN KU WAYDIIN LAHAA SAAMAYN MAKU YEELANAYAA CUDURKA EBOLA QOYSASKA ISU DACWOONYA EE AFRICA GUUD AHAANTEED EE SOMALIDU KA MIDTAHAY? MASE ARAGTAY MEEL LAGAGA HADLAYO WAXAAS OO DAWLADU KAGA HADLAYSO, MAHADSANID?
hala joojiyo tuugade xaaaraankunaaxwaaye bali haku dhacdo
Jimcaale abowe waxab ku su aali xisbigaan ma dhaami donaa xaga sharci bixinta kii hore
walaal horta marka hore waxaad iga godoontaa salaan walaanimo ,waxaad tahay shakhsi si fiican u fikiraya dadkiisana raba inuu caawiyo aniga iyo intii ila midka ahi waan ogsow nahay sidaasna ugu wad dadkaaga somaaliyeed ee aad dhiiga iyo dhalashada wadaagtaan , ilaahayna hakaa abaal marsho